Barnaamijka Raad Raac: Caawo Bollywood-ka aqbaaraadkooda maxaa ugu hadal heyn badan (+Sawiro) – Filimside.net
Barnaamijka Raad Raac: Caawo Bollywood-ka aqbaaraadkooda maxaa ugu hadal heyn badan (+Sawiro)
Habeen wanaagsan aqristayaasha qiimaha badan ee Filimside ku xiran kusoo dhawaada maqaal qoraaladiisa kooban yihiin oo aan idin kugu soo koobeyno qodobada arimaha Bollywood-ka maanta ilaa fiidkan ugu hadal heynta badnayeen:
Superstar Dharmendra ayaa xaaskiisa Hema Malini garab istaagay xili ay doorashada guud Hindiya ka qayb galeyso sidoo kalena ay rabto kursigeeda barlaamaanka inay kusii fadhiso madaama ay ka tirsan tahay xisbiga BJP ee talada Hindiya haayo wuxuu Dharam la hadlay dadka reer Mathura si ay Hema codkooda u siiyaan.
Alia Bhatt ayaa sheegtay inay Hollywood-ka ku biiri doonto maalin maal maha ka mid ah haddii loo soo bandhigo mashaariic xidigtan anfaacaan.
Kajol ayaa ahayd atirishadii marka kowaad loo bandhigay inay sameyso filimka nolosha Jayalalithaa gabadhii reer Tamil siyaasada heerka sare ka gaartay sanadkii horena geeriyootay haatana waxaa doorkaas mataleyso Kangana Ranaut.
Rajkummar ayaa la saxiixday filim sameeye Karan Johar shirkadiisa Dharma Productions waxaana la isla dhex maraa isaga iyo Sidharth Malhotra sameyn doonaan filimka Dostana 2.
Kooxda filimka Kalank ayaa ku sugay magaalada Delhi ayagoo filimkooda xayeysiin balaaran u sameenayaan waxaana mashruucan tiyaatarada la saarayaa Arbacadan (17 April).
Sara Ali Khan ayaa sheegtay inay ku fikireyso ku biirista siyaasada balse hadda talabadaas qaadi doonin oo ay dooneyso xili dambe nolosheeda inay siyaasi noqoto si ay shacabkeeda wax ugu qabato.
Randeep Hooda ayaa ku biirayo markii ugu horeesay Digital World ama wuxuu sameenayaa aflaanta taxanaha ah ee sida tooska ah Online ahaan Internet-ka looga daawado wuxuuna sameenayaa filim taxane ah oo lagu magacaabo Salaam Bombay waxaana Director ka ah Mira Nair wuxuuna ku saleesan yahay sheeko ahaan buuga caanka ah A Suitable Boy ee uu Vikram Seth qoray.
Superstar Sunny Deol ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay sawir ama kaarto u gaar ah doorkiisa dhibka badan uu filimka Blank ku matalaayo kaasi oo ah filim Action iyo qayaano wuxuuna ku jilaa askari dambi baare ah loo xil saaray inuu Karan Kapadia xaqiiqda kasoo saaro waxaana filimkan la daawanayaa 3 May 2019.
Waxaa Aqrisay 525